ULENZA NJANI IQELA LE-IMEYILE KWIGMAIL - KWENZIWA KANJANI
Ulenza njani iQela le-imeyile kwiGmail
Eyona Kwenziwa Kanjani
Ukuba uthumela i-imeyile kubantu abaninzi, ngamanye amaxesha uya kufuna ukuthumela abantu abaninzi nge-imeyile ngexesha elinye. Mhlawumbi yeyeofisi okanye umbutho okuwo. Kungakhathaliseki, kufuneka ufumane umyalezo kuwo onke amalungu ombutho weqela elithile rhoqo. Kunokuba uchwetheze kuwo onke amagama, ngokuphindaphindiweyo, ungenza iqela le-imeyile eliya kukuvumela ukuba uthumele kwiqela elipheleleyo leedilesi ze-imeyile ngegama elinye elilula. Ukuseka iqela le-imeyile kulula kwi-Gmail.
Ngena kwiGmail kwiBhrawuza yakho
Ukwenza iqela le-Gmail, kufuneka uqale ungene kwi-Gmail kwisikhangeli sakho. Yiya ku-www.gmail.com kwaye ungene. Ngena ngedilesi ye-imeyile kunye ne-password. Nokuba ufuna ukungena okanye sele ungenile, uya kwi-inbox yakho. Nje ukuba ungene kwi-Gmail, kuya kufuneka uye kubafowunelwa bakho.
S3studio / Getty Imifanekiso
Yiya kwiPhepha labafowunelwa bakho
Nje ukuba ukwiGmail, kuya kufuneka ukhethe iphepha labafowunelwa bakho. Yenza oku ngokunqakraza kwi-icon yebhodi yebhodi yokujonga elithoba emantla ephepha. Oku kuya kubangela ukuba uGoogle akudwelise usetyenziso lwayo. Kuya kufuneka ubone abafowunelwa abadweliswe malunga nesiqingatha sephepha. Khetha oko.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala usebenzisa uQhagamshelwano lukaGoogle, uya kunikwa idemo emfutshane. Cofa amaqhosha okuqhubela phambili kwaye ucofe 'Ndiyifumene' ukuvala idemo. Emva koko uya kubona imenyu ekhohlo kwaye uluhlu lwakho lwabafowunelwa ekunene. Nceda qaphela ukuba kufuneka ube kuBafowunelwa uyilo olutsha hayi oludala. Ukuba ukwinguqulelo endala, yiya ezantsi kwimenyu ekhohlo kwaye ucofe u-'Zama umboniso wabafowunelwa' ukuze ungene kuguqulelo lwamva nje.
Nje ukuba unohlelo olutsha lwabafowunelwa, kufuneka uqale umisele igama leqela. Uyenza loo nto ngokukhetha iileyibhile kuluhlu lwemenyu ekhohlo. Imenyu iyavula, kwaye enye yeenketho nguFakela iileyibhile. Khetha oko. Ibhokisi enomgca ibonakala inamagama athi Yenza ileyibhile. Chwetheza igama elitsha leqela lakho le-imeyile emgceni kwaye ukhethe Lungile.
Khetha Abafowunelwa Bakho
Ngoku ekubeni uneqela lakho elitsha le-imeyile, lixesha lokuyigcwalisa. Khetha abafowunelwa bakho beqela lakho le-Gmail ngokubeka isalathisi semouse yakho phezu kwezangqa nge-avatar okanye unobumba wokuqala wegama lomfowunelwa wakho. Ibhokisi yokukhangela iya kuvela. Nqakraza iibhokisi zokukhangela ngamnye wabafowunelwa ofuna ukuba ukhethe. Njengoko uzikhetha, ibhena enebhokisi yokukhangela engenanto iya kukwazisa ukuba bangaphi abafowunelwa obakhethileyo.
Yongeza abafowunelwa bakho kwiQela
Inyathelo elilandelayo kukongeza abafowunelwa obakhethileyo. Uyenza loo nto ngokucofa kwileyibhile encinci emnyama enepentagonal kwikona ephezulu ngasekunene ethi 'Lawula iileyibhile' xa uhambisa isalathisi semouse phezu kwayo. Ukucofa kuyo kuzisa amagama eqela akhoyo ukuze udibanise abafowunelwa bakho. Khetha igama leqela olenzileyo. I-Gmail iyakongeza loo magama kuluhlu.
Yiya kwiGmail kwaye ungene kwakhona
Ngoku uneqela lakho olinike igama usebenzisa i Faka iileyibhile kwaye ulawule iileyibhile imiyalelo; ngoku lixesha lokuthumela umyalezo. Buyela ku-www.Gmail.com kwaye ungene, ukuba uyafuna. Kuya kufuneka ukwazi ukubona ibhokisi yakho yangaphakathi kwakhona. Uya kufuna ukuvavanya iqela lakho elitsha le-imeyile.
Eplisterra / Getty Imifanekiso
Khetha i Qamba iqhosha kwicala eliphezulu lasekhohlo le-inbhoks. Iza kuzisa umyalezo omtsha wefestile. Kwi Ukuya: icandelo, qalisa ukuchwetheza kwigama leqela lakho le-imeyile. Iya kunikela amacebiso okugcwalisa intsimi ize ibonise needilesi zeqela.
Devonyu / Getty Imifanekiso
Gqiba Ukuqamba I-imeyile
Gcwalisa umxholo kwaye wongeze nawuphi na umyalezo onqwenela ukuwuthumela ebantwini. Emva koko cofa ukuthumela. Ukuba unqwenela ukugcina iidilesi ze-imeyile ziyimfihlo, ungathumela umyalezo ngokukhetha kuqala i-BCC uze ufake igama leqela lakho le-imeyile. Ngaloo ndlela, unokuqinisekisa ubumfihlo kuwo onke amalungu eqela lakho.
Iingenelo zokuSebenzisa uLuhlu lwe-imeyile
Amaqela e-imeyile kaGoogle aluncedo njengoko akuseyomfuneko ukuba uchwetheze idilesi yomfowunelwa rhoqo. Endaweni yoko, ukhetha iqela le-imeyile olenzileyo kube kanye kwaye usebenzise elo gama. Unokwenza amaqela e-imeyile amaninzi njengoko ungathanda kwaye akukho mda kwinani leedilesi ozifakileyo.
indoda yesigcawu kude nekhaya
X-amadoda bhanyabhanya ngokulandelelanayo
star wars jedi: i-fallen order cast
hlala ubalekela kwi-chateau
ndiqala ngabani ixesha ndingusaziwayo u2019
fa indebe yekota yokugqibela kwi tv